कृषि तथा पशुपञ्क्षी जन्य उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने ना.प.स्वा. प्राविधिक बुमी :: नन्द सिंह :: Nepal Bot
कृषि तथा पशुपञ्क्षी जन्य उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने ना.प.स्वा. प्राविधिक बुमी
हुम्ला । हुम्लाका सातवटै स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपञ्क्षी जन्य उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने सिमकोट गाउँपालिका नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक विष्णु बुमीले बताएका छन् । हुम्लाका सात वटै स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपञ्क्षी जन्य उत्पादनमा ध्यान नदिएपछि खस्कदो अवस्था देखिने भएको हो ।
नेपाल एक कृषि प्रदान देश हो जहाँ हाल ६०.४ प्रतिसत जनसंख्या कृषि पेशामा आधारीत छन् । कृषि नै देशको अर्थतन्त्रको मुल आधार हो । जसमा हुम्ला जिल्ला पनि ७७ वटै जिल्ला भित्रको एक हिमाली जिल्ला हो । जस्मा सातवटा स्थानीय तह रहेका छन् । ६० हजार भन्दा बढि जनसंख्या रहेको छ । सो मध्ये आधिकांस मानिसहरु कृषि पेशामा आधारित छन् । तर हुम्लामा पछिल्लो समयमा कृषि तथा पशु जन्य उत्पादक घट्दै आएको छ ।
जुन हो परम्परागत कृषि प्रर्णाली र आर्थिक पहँुजको कमीका काराण उत्पादनमा ह्रास आएको छ । जवसम्म हुम्लाका स्थानीय तहले कृषि तथा पशु जन्य पदार्थको उत्पादन हुने क्षेत्रमा जोड नदिए हुम्लामा कृषि प्रर्णाली खस्किदो अवस्थामा हुने देखिन्छ । पशुपंञ्क्षी पालन तथा कृषि व्यवसायमा आधुनिक शिपमुलक तालिम तथा अन्य पशुपंक्षि पालन उत्पादनमा वृद्धि हुने क्षेत्र अपनाइयो भने सुधार हुने पशु स्वास्थ्य प्राविधिक विष्णु बुमीको भनाई रहेको छ ।
सातवटा स्थानीय तह मध्ये बढि जसो स्थानीय तहमा पशु सेवा शाखा तथा कृषि विकास शाखा नामको मात्रै शाखा भएको देखिन्छ । जुन शाखाबाट दिइने पशु सेवा तर्फका कुनै पनि सेवा नदिएको बताए । जुन पशु सेवा प्राविधिकहरुलाई गुनासो गर्दा सधै आर्थिक अभाव भएका कारण सेवा दिन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । हुम्लाका स्थानीय सरकारले कार्यकर्तामुखी बजेट बनाउँने भएका कारण यो अवस्था आएको देखिन्छ । प्रयाप्त मात्रामा कृषि तथा पशु जन्य क्षेत्रमा लगानी देखाए हुम्लामा अन्य क्षेत्रबाट आयत हुने पशु तथा पशु जन्य पदार्थमा कमी देखिने छ ।
हुम्लाका स्थानीय तहरु मार्फत दिइने पशु स्वास्थ्य उपचार सेवा पनि नदिएको पाइएको छ । जस्को कमजोरी जनप्रतिनिधिको देखिन्छ । शाखाबाट वितराण हुने औषधिहरु उक्त शाखामा प्रयाप्त मात्रामा भएको या नभएको भनि अनुगमन मुल्यांकन नगर्नाले यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी र काम कर्तव्यको बारेमा प्रस्ट ज्ञान नहुनुले पनि यस्तो अवस्था आएको पाइन्छ ।
हुम्लामा बाहिरबाट आउने बोइलर कुखुराको मासुले धेरै बजार पाईरहेको छ । यो अवस्थालाई कम गर्न हुम्लामा सबै स्थानीय तहले कृषकहरु पहिचान गरि उक्त कृषकहरुलाई शिप मुलक तालिम बाख्रा पालन तथा हिमाली भेगमा हुने कुखुरा पालन व्यवसायमा संग्लंन गराएमा हुम्लामा मासु तथा मासुजन्य पदार्थमा कमि नहुने बुमिको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ६, २०७९ १७:३३
देश, जनता र पार्टीका सामु आज भएका र भोलि आउनसक्ने चुनौतीहरुको सामना गर्न, सबै सकारात्मक सम्भावनाहरुलाई उद्घाटित गर्दै वर्तमान प्रतिस्पर्धि विश्वमा शान्ति र मानवताका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको, विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा उभिएको तथा वीरता र परिश्रमको लागि प्रसिद्ध जनताको मातृभूमि नेपाललाई शीर ठाडो गरी समृद्धिको पथमा अग्रसर रहने तुल्याउन पार्टीलाई नेतृत्व दिने अठोट गरेको छु । पुरा पढ्नुहोस्